Wake up ! Thidagu Sayardaw! Stop acting like wooden ladle and listen to Buddha’s teaching | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
HomeWake up ! Thidagu Sayardaw! Stop acting like wooden ladle and listen to Buddha’s teaching
မဘသနဲ့ မဘသကို ကိုးကွယ်နေကြသူတွေကို
ပြောချင်တာက မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နယ်နိမိတ်ထဲကနေ
စာအုပ်တွေ ဖတ်ရှုလေ့လာမှု နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊
အဲဒီအခါကျရင် “မြန်မာ”ဆိုတာရော၊ “ဗုဒ္ဓဘာသာ” ဆိုတာပါ တကဲ့ကိုမှ တကယ့်ကို အနည်းစုလေးပါလားဆိုပြီး
သိမြင်ခံစား လာနိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်လူမျိုး မဟုတ်တဲ့ အခြားလူမျိုးတွေ၊
ကိုယ့်ဘာသာမဟုတ်တဲ့ အခြား ဘာသာဝင်တွေက
ဆက်ဆံကြသလဲဆိုတာကို လေ့လာသိရှိခွင့် ရရှိနိုင်ကြမှာပါ။
#မြန်မာဖြစ်ရလို့အပြစ်ရှိသလို ခံစားရ တာမျိုး၊
#ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်ဖြစ်ရလို့ အပြစ်ရှိသလို ခံစားရတာမျိုး၊
လူ့အဖွဲ့အစည်း မျိုး မြန်မာပြည်ပြင်ပမှာ ရှိ/မရှိဆိုတာကိုလည်း
လေ့လာသိရှိနိုင် မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီလို စိတ်ခံစားမှုမျိုးခံစားရအောင် လုပ်တဲ့နိုင်ငံ
လုပ်တဲ့လူ့အသိုင်း အဝိုင်းမျိုးရှိတယ်လို့ မကြားဖူးပါဘူး။
သို့သော်လည်း အဲဒီ #မဘသကိုယ်တော်တွေနဲ့
နိုင်ငံပြင်ပကို ရောက်ဖူးကြပုံ မရပါ ဘူး။
လူနည်းစုအဖြစ် နေထိုင်ဖူးကြပုံ မရပါဘူး။
ဗုဒ္ဓဘာသာကမ္ဘာလို့ အထင်ရောက် နေကြသူတွေပဲ
ပြန်လည် မျှဝေကြပြီး မဘသဟာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ
စံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့ တိုင်းတာရင် ကျင့်ဝတ်နဲ့မညီညတ်တဲ့
အကြောင်းကို ပညာပေး ဆွေးနွေးကြဖို့လိုအပ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ပြည်ပကိုလည်း အိမ်ဦးနဲ့ကြမ်းပြင်လို ဥဒဟို သွားလာနေတဲ့၊
ဘာသာကြီး လေးခု စလုံးက ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့
လည်း အခါအားလျော် စွာ နှီးနှောဖလှယ်လေ့ရှိတဲ့
သီတဂူ ဆရာတော်ကြီးအနေနဲ့ မဘသ အဖွဲ့ကြီး
တာဝန် ယူပြီး ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း ပေးဖို့လိုတယ်လို့
“သာသနာပြုလုပ်ငန်း”ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ အခြေခံအားဖြင့် လုပ်ဆောင်ရမယ့် လုပ်ငန်း စဉ် (၂) ခုရှိတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။
၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေတိုးပွားလာအောင် စည်းရုံးတဲ့
၂။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေထဲမှာ ဘာသာရေးကျင့်ဝတ်နဲ့
မညီညွတ် တဲ့သူတွေကြောင့် သာသနာ ထိခိုက်မှာကို
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတဲ့ “သာသနာပြုပြင်ရေး လုပ်ငန်း” ဖြစ်ပါတယ်။
ခုတွေ့နေရတာက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ တိုးပွားသည်ထက်တိုးပွားအောင် ကမ္ဘာပတ် စည်းရုံးနေတဲ့ သာသနာပြုလုပ်ငန်းစဉ်
အမှတ်(၁) တခုတည်းကို လုပ်ဆောင်နေတာကိုပဲ
ကျင့်ဝတ်နဲ့ မလျော်ညီတဲ့ ဘာသာဝင်တွေကြောင့်
သာသနာ ထိခိုက်မှာကို ပြုပြင် ထိန်းကျောင်းတဲ့ သာသနာ
ပြုပြင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ် အမှတ်(၂)ကို လုပ်ဆောင် နေတာ
ဒီအမှတ် (၂) လုပ်ငန်းစဉ်က ပြုပြီးတဲ့သာသနာကို တည်တံ့
အောင် ထိန်းသိမ်းတဲ့ လုပ်ငန်းတခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
လော်ကြီး လော်ငယ်အသွယ်သွယ် နဲ့ နေ့ညမပြတ်
လူသတ်မှု၊ မုဒိမ်းမှု၊ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေးမုန်းတီးမှု၊
ထိတ်လန့်နေ ကြရတဲ့အခြေအနေကို ရောက်နေခဲ့ပါပြီ။
ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ အန္တရာယ် ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ ဘာသာတရားတခုအဖြစ်ကို ရောက်ရှိလာနေတဲ့နှုန်းက
နောင်မှာ မြန်မာပတ်စ်ပို့နဲ့ သင်္ကန်းဝတ်ထားတာတွေ့ရင်
ရှိမလာနိုင်ဘူးလို့ ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်ပါဘူး။
ဖြစ်သွားတဲ့ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတခုဟာ နိုင်ငံတကာ
အကဲဖြတ်မှတ်တမ်းတွေထဲမှာ အလေးထား စောင့်ကြည့်စရာ အချက်အလက်တခုအဖြစ် စာရင်းဝင်သွားတာကြောင့်မို့လို့ပါပဲ။
တဘက်နဲ့တဘက် တောင်းပန်လိုက်လို့ ပြည်တွင်းမှာ
ပြီးပြီး ရော ပြီးသွားနိုင်ပေမယ့် ပြည်ပမှာ စာရင်းဝင်ပဋိပက္ခ
ဘာသာရေး၊လူမျိုးရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ဆက်စပ်မှုတွေကို
သုတေသနပြုတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတွေ၊ အရေးယူဆောင်ရွက်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ အများကြီးရှိနေကြပါတယ်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှာ #ဘွာတေးဆိုတာ မရှိပါဘူး။
အထူး သဖြင့် ဘာသာရေး ပဋိပက္ခလို ထိရှလွယ်တဲ့
ပဋိပက္ခမျိုးတွေမှာ တာဝန်ရှိကြတဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အစိုးရရဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပုံဟာ အထူးအရေးကြီးလှပါတယ်။
မဘသတို့ ပေါ်ပေါ်တင်တင် လုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ သာသနာကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်မဟုတ်တဲ့သူတွေမပြောပါနဲ့
စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေလည်း အနည်းနဲ့အများ တိုးပွားလာနေကြပါပြီ။ ဒါပေမဲ့ အားရစရာတခုက ပြည်သူတွေရဲ့သိမှုနဲ့ ဆင်ခြင်နိုင်စွမ်း ပါပဲ။
ပြည်သူတွေက ဒါဟာ အမုန်းမှိုင်းတိုက်ထားတဲ့
ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်ချင်သူတွေ အကြိုက် တွေ့အောင်
သူတို့ဆင်တဲ့ထောင်ချောက်ထဲ အကျခံလို့ မဖြစ် ဘူးဆိုတဲ့
သို့သော်လည်း ပြဿနာက ထိရှလွယ် လွန်းတာကြောင့်
ပြည်သူတွေရဲ့ ဆင်ခြင်တုံတရားဟာ အထိပါး မခံရနိုင်ပါဘူးလို့တော့ အာမခံနိုင်ဖို့ ခဲယဉ်းလှပါတယ်။
← Bama Buddhist military and its derivative organisations used to change names and sometime pretend to use another group with different names and positions but ESSENTIALLY they are the metamorphosis or evolution or just simply using ALIAS to deceive the people of Myanmar and the world
မဘသဖြစ်ဖြစ် မျိုးချစ် ဖြစ်ဖြစ် ပြည်သူ မလိုလားတာလည်း သိတယ်။ လုပ်နေတာက သွေးထိုး လှုံ့ဆော်နေတာလည်း သိတယ်။ အရေးယူလိုက်ရင် ဘုန်းကြီးတွေ၊ မျိုးချစ်တွေ ဆူပူ၊ တပ်က အာဏာ ပြန်သိမ်း ဆိုတာကြီး ကြောက်ပြီး လုပ်စရာရှိတာ မလုပ်ရင် ငွေညှစ်သမားလို ကြောက်မှန်း သိလေ တိုးယုတ်လေ ဖြစ်မှာပဲ။ အရေးယူ မကြည့်ပဲ (တစ်စက်မှတောင် စမ်းမကြည့်ပဲ) အသေကြီးလို ခံနေရင် ပိုသောင်းကျန်းလာမှာပဲ →